Mustaqbalka Arsene Wenger Oo Khatar Ku Jira Hal Arin Oo Uu Ku Badbaadin Karo & Saddex Dookh Oo Ay Hor Dhigeen Maamulka Gunners – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Mustaqbalka Arsene Wenger Oo Khatar Ku Jira Hal Arin Oo Uu Ku Badbaadin Karo & Saddex Dookh Oo Ay Hor Dhigeen Maamulka Gunners
Mustaqbalka Arsene Wenger Oo Khatar Ku Jira Hal Arin Oo Uu Ku Badbaadin Karo & Saddex Dookh Oo Ay Hor Dhigeen Maamulka Gunners
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa waayi kara shaqadiisa ka hor inta uuna dhamaan heshiiskiisa iyada oo laga yaabaa in laga cayriyo shaqada Gunners dhamaadka xilli ciyaareedkan xilli ay kooxdu ku xireen hal shardi si uu u sii haysto shaqdiisa.
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayuu saaran yahay cadaadis xun si uu kooxda ugu soo saaro champions league xilli ciyaareedka dambe xilli ay kooxdu ka fiirsanayso in ay qaataan go,aan wakhti hore ah oo ku aadan mustaqabalkiisa.
Arsenal ayaa doonaysa in ay ka fogaato wixii xilli ciyaareedkii hore ku dhacay kooxda taas oo ah in ayna u soo bixin champions league markii ugu horaysay tan ilaa 1997 sanad ka hor inta uuna tababaraha reer France ku soo biirin kooxda.
Rajada uu tababaruhu ku sii haysan karo kooxda ayaa khatar ku jirta maadama ay haatan kooxdu fadhido kaalinta 6-aad 8 dhibcoodna ka dambayso kaalinta 4-aad xilli fursada ugu fiican ee ay uga soo qayb gali karaan tahay ku guulaysiga Europe League.
Si kasta ha ahaatee qorshihii Wenger ee uu doonayay in uu awooda ku saarto tartanka ayay dhirbaaxo la kulantay kadib markii uu dhaaawac soo gaaray weeraryahankiisa 52 milyan ku fadhiya ee Alexandre Lacazette kaas oo 6 todobaad garoomada ka maqnaan doona.
Xilli uuna Pierre-Emerick Aubameyang ciyaari karin Europe league sidoo kale ay kooxdu iibisay xiddigaha Alexis Sanchez, Olivier Giroud & Theo Walcott, Danny Welbeck ayaa ah weeraryahanka kaliya ee kooxdu u jooga kana qayb qaadan kara kulanka lugta 1-aad ee ay la ciyaari doonto kooxda reer Sweden ee Ostersunds.
Qaar ka mid ah maamulka sare ee kooxda ayaa doonaya in mustaqablka Wenger la xaliyo xilli ciyaareedka dambe isaga oo saddex dookh haysta.
saddexda dookh ayaa kala ah in uu Wenger kooxda ka tago dhamaadka xilli ciyaareedkan, in uu xaqiijiyo in uu kooxda ka tagayo marka uu heshiiskiisu dhamaado sanadka 2019 ama uu heshiis cusub u saxiixo kooxda.
Wenger ayaa doonaya in uu heshiiskiisa dhamaysto laakiin Sportsmail ayaa fahamsan in qorshaha uu kooxda kaga tagi karo kooxda xagaaga uun meel sii yaalo.
Arsenal ayaa ka cabsi qabta in seegista sanadkii 2-aad oo xiriir ah ee champions league in ay wax u dhinto soo jiidashada xiddigaha heerka caalami ah.